Miaraha ao amin'ny ekipan'ny Element Society (ny pejy momba ny asa) (misy ny asa NCS)
Tianao ve ny miara-miasa amin'ny tanora ary mahita azy ireo hahatratra ny tsy mampino? Miangavy mba hiaraka aminay!
Raha miasa ao amin'ny Society Society ianao dia hanampy ny tanora hanatratra ny tsy mampino, dia hanome hery ny tanora hanova ny fiarahamoniny ianao, hanangana ny tanjony manokana ary ho lasa modely ho an'ny mitovy taona aminy.
Ny Society Society dia fiantohana nomena anarana (laharana: 1157932), orinasa voarakotry ny antoka (laharana: 08576383) ary mpandraharaha mpampianatra voasoratra (UKPRN: 10047367).
Ny Society Society dia manolo-tena hiaro ny ankizy sy ny tanora.
Ny Fikambanana Elector dia mpiara-miasa mpampiasa.
Olona iray izay olona liana amin'ny fanovana ve ianao?
Ny fanandramana miovaova eo amin'ny fiainana NCS dia tsy ho azo atao raha tsy misy ny asa mafy ataon'ireo mpiasa mpanentana ny aingam-panahy.
Azonao atao ny mandray anjara amin'ny hetsika tanora mahagaga. Ny mpiasa an-tsokosoko dia ao am-pon'ny NCS, ary mirehareha amin'ireo olona an'arivony isika izay mandrisika, mitarika sy mitaona ny tanora amin'ny diany NCS. Ny fahombiazan'ny NCS dia tsy ho azo atao raha tsy ny fitiavana sy ny fanolokoloana ny ekipan'ny Staff NCS amin'izao fotoana izao.
Raha liana amin'ny anjara asa rehetra ianao, azafady mividy ireo antontan-taratasy etsy ambany ary mandefa mailaka fangatahana amin'ny ekipan'ny NCS at - ncs@elementsociety.co.uk
Tianay ny hiara-miasa amin'ireo olona liana amin'ny fanohanana ny tanora mba hahatratrarana ny tsy mampino.